Tun Tun's Photo Diary: Taungyi #7 (Mya Sein Taung Pagoda & Return to Mandalay)
Taungyi #7 (Mya Sein Taung Pagoda & Return to Mandalay)
ေ၇ွဘုန်းပွင့် ဘု၇ား ကနေ သိပ်မသွားရပါဘူး မြစိမ်းတောင် ဘု၇ားကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ တောင်တစ်တောင် တည်းမှာပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒီဘု၇ားမှာ ဗုဒ္စ၇ုပ်ပွားတော် အမျိုးမျိုး တွေ.ခဲ့တယ် (မြန်မာ၊ တ၇ုတ်၊ ရှမ်း)။ ဒီဘု၇ား မှာလဲ လာလည်တဲ့သူ အင်မတန်နည်းပါတယ်။ အဲ့နေ.တုန်းက ဆို ကျွန်တော်တို. တဖွဲ.ပဲ ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီစာလေးတွေကို သဘောကျလို. ဓါတ်ပုံ၇ိုက်လာခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်း စိတ်ထဲသွင်းထားနိုင်၇င်တော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။
Network game shop
တောင်ကြီးမှာ လည်ခဲ့တာ ဒီမြစိမ်းတောင် ဘု၇ားက နောက်ဆုံးနေ၇ာ ပါပဲ။ ကားဆ၇ာက ဟိုတယ်ကို ပြန်ပို.ပါတယ်။ ဟိုတယ် မှာ မနက်က check out လုပ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ အပ်ထားခဲ့တာကိုး။ နေ.လည်စာ စားချိန်မို. နေ.လည်စာ စားဖို. ဟိုတယ် အနီးတ၀ိုက်မှာ စားသောက်ဆိုင် လိုက်ရှာပါတယ်။ အဝေးကြီး လမ်းမလျှောက်ချင်တာနဲ. ဟိုတယ်လမ်းထဲကပဲ ပုံစား ရှမ်းထမင်းဆိုင် မှာ ပဲ ၀င်စားလိုက်တယ်။ ပုံထဲမှာ မြင်၇တဲ့ အတိုင်းပဲ ဟင်းတွေက တော်တော်လေးစားကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော် က ဟင်းခွက်တွေ ကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်နေတာ ဆိုင်၇ှင်ကမြင်တော့။ ဆိုင်နာမည်ပါအောင် အပြင်ကလဲ ၇ိုက်ပေးပါဦး ဆိုလို. ဆိုင်အပြင်ကနေ တပုံထပ်၇ိုက်ခဲ့တယ်။ တော်တော် နပ်နဲ. ဆိုင်ရှင်ပဲ။း) သူ. ဆိုင်နာမည်က ခေမရငှ် တဲ့။ မနေ.က စားခဲ့တဲ့ တောင်ကြီး ကဖီးနဲ. တလမ်းထဲပါပဲ။
ဟိုတယ်က ဆီစက်လဲ ရှိပုံ၇တယ်။ ဆီပါေ၇ာင်းတာကိုး။ ဆိုင်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ထည်း ထိုင်နေတာ ပျင်းနေပုံ၇တယ်။ ကျွန်တော်တို.ကလဲ စားပြီးသောက်ပြီး ဘာမှ လုပ်စ၇ာ မရှိလို. ဟိုတယ်မှာ ထိုင်နေတယ်။ မန္တလေး ကို ညနေ ကားနဲ. ပြန်မှာဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ ၃၊၄ နာ၇ီလောက် ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်တယ်။ေ၇ွတောင်၇ိုး ကားဂိတ်ကလဲ ဟိုတယ် နဲ.နီးတယ်လေ။ အစက ၇ုပ်ရှင်သွားကြည့်မလို.ပဲ။ လမ်းလျှောက်သွား၇င် နည်းနည်း လှမ်းတာနဲ. မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။
ညနေ စောင်းတော့ မန္တလေးကိုပြန်မည့် ဘစ်ကားပေါ်ေ၇ာက်ပါပြီ။ ဒီကလေးမက ကျွန်တော်ကို လူထူးလူဆန်း မြင်သလို. ပြူးပြဲ ပြီး ကြည့်နေတာ။ ပြီးတော့မှ သူ.ကို ယောင်္ကျားလေးမှန်းသိတယ်။ သူ.အမေက သူ.ကို သားတဲ့။း)
ဒါကတော့ အလာတုန်းက ကားခဏ၇ပ်တဲ့ သာစည်မြို. က စားသောက်ဆိုင်ပါတယ်။ အပြင်က ဆိုင်တန်းတွေ မှာ ဒေသထွက်ကုန်တွေ အစုံေ၇ာင်းပါတယ်။ မှတ်မှတ်၇၇ ထောပတ်သီးတွေ ဈေးပေါလို. ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။
at 3/28/2014 08:00:00 PM